Ifenisha yanamuhla kakhulu yegumbi, ekamelweni, ekhishini (isithombe)
Njengomthetho, labo abahlala efulethini encane, empeleni iba umbuzo wokubekwa kahle kwefenisha. Lokhu kuyadingeka ukuze wenze isikhala sisebenze kakhulu. Ukunakekelwa kufanele kuthathwe ukuqinisekisa ukuthi ifenisha ihlala njengendawo encane ngangokunokwenzeka futhi ayibanga imbangela nokulimala. Uma inganiki ukuphumula kumnikazi wekamelo elincane, kudingeka ucabangele ngemininingwane ehlukahlukene. Kudingeka sibe nesithakazelo emibuthanweni mayelana nokunciphisa umuzwa osondelene ekamelweni, ukuthuthukisa izindinganiso zokuphila zamalungu omndeni.
Kumele kuqashelwe ukuthi abaguquguquli bayisisombululo esihle kakhulu sokulondoloza isikhala. Ngaphezu kwalokho, ifenisha yanamuhla efulethini izodala umuzwa owengeziwe wobudlova nokududuzeka. Noma kunjalo, yimiphi imisebenzi esemqoka yezinto ezinjalo zangaphakathi? Zilezi zilandelayo:
Okokuqala, kufanele kushiwo futhi ukuthi izinketho zefenisha ezakhelwe ngaphakathi zingahlanganiswa, ngaleyo ndlela zikhulule isikhala esengeziwe kwezinye izinto nezinto. Ngokuvamile, ezindlini zokuhlala kukhona ama-sofas-transformers, amabhodi okugaya, angafakwa futhi asebenzise nezinye izinto zalolu hlobo.
Iningi lefenisha-transformer liyakwazi ukusebenza kakhulu ukuhlela isikhala ekamelweni. Kuqondene nezinhlobo ezinjalo zezinto zangaphakathi njengombhede we- sofa, isihlalo sobuhlalo, itafula lokuhlola kanye nezinye izinketho ezifanayo. Ifenisha yesimanje kunazo zonke iphenduka isilafa noma i-armchair ibe yindlala uma kunesidingo. Kuzophinde kuhlangane kalula kule nguqulo yokuqala. Kufanele uthenge i-ottoman, engashintsha esitokisini uma kunesidingo. Itafula elincane lekhofi elinamashalofu enkampanini encane kuyoba yinto engavamile.
Ifenisha yanamuhla yalolu hlobo ibonakala ngokuba khona kwesamba esikhulu sokugcina isikhala. Inqwaba yezinhlobo zefenisha-i-transformer iye yakhiwe ngaphakathi kwezingubo zokugqoka kanye nabadwebi. Ngokuvamile, lezi zikhetho zingabonwa kanye namashalofu.
Inzuzo yokugcina yefenisha enjalo ukuhlobisa kwayo nokubukeka kahle kakhulu. Ihambisana kahle nanoma yisiphi isitayela ekamelweni futhi kuzohlale kudingekile.
Ifenisha engxenyeni ingahlukana ibe yizinhlobo ezingu-5:
Ukwakhiwa kwesigaba sokubhekelwa. Kakade igama liyabonakala ukuthi ifenisha yanamuhla yanamashalofu ahlukahlukene, amabhokisi, amakhabethe, ama-mezzanines. Njengomthetho, zitholakala kukho konke ukuphakama kwegumbi futhi zihlale zidingekile.
Izigaba ezixhunyiwe ngokugcwele. Isici esihlukile sensimu enjalo ukuthi ingxenye ngayinye yale nto ingasetshenziswa yedwa noma ihlanganiswe nezinye izigaba. Njengomthetho, zonke izingxenye zinokuphakama okufanayo, ububanzi nokubonakala kwendawo yokudonga.
Isigaba esivamile. Zibonakala nge-module ejwayelekile. Izigaba ngokwazo zitholakala ezindaweni ezihlukahlukene.
Isigaba esicacile se-stackable. Isisekelo kulokhu kuyisici esihlukile. Isetshenziselwa yedwa noma njengengxenye yomklamo jikelele. Izigaba ezinamandla azikwazi ukusetshenziselwa ngokwehlukana. Zenzelwe kuphela isicelo jikelele.
Ukuhlanganiswa kwezigaba. Kulesi simo, izakhi eziyisisekelo ziyizinto ezihambisana nendawo futhi ezihambisana nendawo-stackable. Ngenxa yalolu khetho ungenza inamba enkulu yefenisha ehlukile.
Igama lesitayela lithi ifenisha ithengwa ngamanani amancane, futhi ukuhlobisa cishe akukho. Egumbini elinjalo kuyadingeka ukhethe ifenisha ye-shadow shades ukuze ubheke kuleli gumbi ukuhambisa, kunokuba uyeke kunoma iyiphi into. Imibala evamile kakhulu emhlophe, emnyama, emnyama, kanye nomthunzi ovamile oatmeal.
Ifenisha yanamuhla yendawo yokugqoka kule ndlela isitayela encane, iminyango yayo iyisibuko noma ibala. Izindawo ezihamba kahle kakhulu nenamba enkulu yezingilazi - yilokho amakamelo abukeka ngesitayela se-minimalism. Kungcono ukugxila kwezihloko ezintathu eziyinhloko. Isibonelo, kungaba ukuma kwe-TV, i-shelf ne-disk support. Uma ukhetha, kufanele uqaphele ukuqinisekisa ukuthi ubuso bazo zonke izinto zangaphakathi bebushelelezi futhi ngaphandle kwemigudu.
Isitayela se-high tech
Isici sesici salesi sitayela ukusetshenziswa kwefenisha elincane elenziwe ngezinto zokwaziswa zanamuhla. Phakathi kwama-shades ukhetha ukungeniswa kwe-unsaturated - ngokuvamile kusetshenziswe imibala emhlophe, emhlophe nangensimbi. Isitayela esifanayo ezindlini zibhekwa ngokuba khona kwethempeli elikhulu lasekhaya, futhi i-plasma ngaphezu kobubanzi bomdanso. I-sofa-transformer enkabeni enjalo ingenasici. Izohambisana ngokuphelele netafula lekhofi.
Ifenisha yanamuhla ngesitayela se-high tech ingathola umbono othakazelisayo futhi ocebile. Kuvunyelwe ukuhlanganisa izinto ezihlukene: kusuka epulasitiki kuya kokhonkolo. Ngeke neze kube yinto engafaneleki. Ukuze udale ingaphakathi ngesitayela sekhono eliphezulu, umane uhlanganise ubuchwepheshe obuphezulu, ukusebenza okuphezulu kwefenisha nokuthembeka kwayo.
Isitayela sifanele kulabo abathanda ukuhlanganisa imigqa egelezayo ngebunjwa obuhle, ukusebenza okugcwele nokusebenza okuphelele. Izakhiwo zemvelo ezisetshenziswa kaningi - insimbi, ingilazi, izinkuni, itshe. Eqinisweni, lesi sici asinendima kule sitayela. Into eyinhloko ukuthi ifenisha ikhululekile futhi inokwethenjelwa ngangokunokwenzeka.
Into ebalulekile yesitayela yi-sofa, ubukhulu obukhethiweyo kuye ngobukhulu bekamelo ngokwayo. Inzuzo yalo enkulu yimilenze eqoshiwe, ngokushintshelela ibe yizingalo zokuzivikela noma emuva. Futhi lesi sitayela sifanele abantu abathanda amafomu okungavamile. Ifenisha ehlanjululwayo yanamuhla, kuleli cala libe yinsifa, ingaba ne-asymmetry nokufaka kwangempela. Kuzoba khona amaphethini ahlukene ku-upholstery. Kumele futhi ugxilise ama-pouffes, itafula lekhofi kanye nesitulo sezihlalo. Udonga ludlala indima ebalulekile. Futhi ubukhulu bayo bakhethwa kuye ngesifiso somnikazi. Kungaba okungenani noma ububanzi bendawo.
Ifenisha YaseKhisimusi Yomsebenzi
Bambalwa bangaphikisana ngokuthi igumbi elibalulekile endlini noma efulethini liyikhishi nje. Lapha bathola izimfihlo zokupheka, isimangaliso senziwa ngendlela yokupheka. Yiqiniso, leli gumbi kufanele libe lula, likhululekile futhi lisebenze ngangokunokwenzeka. Kulolu cala ukuthi inqubo yokupheka izoletha ukwaneliseka okuningi. Ngokuvamile, ifenisha eyinhloko yekhishi - isethi ehlangabezana nokulungiselelwa okuhlukile. Ngaphambi kokuba ukhethe, kubalulekile ukuqhuba isilinganiso esigcwele ekamelweni bese unquma ubukhulu. Kumele kunqunywe ukuthi yiziphi izinto zasendlini ezizoba ekhishini.
Izinhlobonhlobo zezipesheli zanamuhla
Ifenisha emakethe iboniswa yinani elikhulu lezinketho ezimisiwe. Amafemu amaningi avuma ukwenza amamodeli esayizi elithile, kuye ngesifiso somthengi. Okusho ukuthi, ukukhiqizwa kwamabhokisi, amatafula kanye nezibhebhe zetafula kungenzeka. Zingahluka ngokuphakama, ubude, ububanzi, amakamelo kanye nephethini. Ama-facades nawo alula ukukhetha, ngoba kunezinketho eziningi emakethe. Izinto zokwakha zingenziwa kokubili futhi zendalo (izinkuni, ingilazi, insimbi). Isinqumo sombala kufanele sikhethwe ngumnikazi kuphela, kusukela ngaphakathi langaphakathi lendawo.
Ifenisha ekamelweni lezingane ibaluleke kakhulu, njengoba kufanele ibe njengobungane futhi iphephile ngangokunokwenzeka. Kulesi simo, izinto zangaphakathi zihlukaniswe zaba izinhlobo ezintathu, kuye ngezinhloso zabo kanye nezinto ezivela kuzo. Ifenisha yanamuhla yekamelo lezintambo likaKhabhinethi livamile. Le amashalofu, amatafula ombhede, abadwebi, amakhabhinethi nezinye izinto ongagcina ngazo izinto. Ifenisha ehlongozwayo imelwe izinketho ezehlukene zokuphumula nokulala (ama-sofas, izihlalo zamakhanda, ama-pouffes, njll). Phakathi kwemvelo yezemidlalo nezesekeli kungabonwa imigoqo enezingqimba, izingxube ezihlukahlukene nezilayidi.
Uma ukhetha, qaphela ukuba khona kwamakhonksi abukhali. Empeleni, akufanele kube, ikakhulukazi uma ingane isencane. Ukuhlelwa kwemisebenzi nakho akuthandeki. Okuthandwayo kunikelwa ezintweni zemvelo nezomvelo. Kukhona ifenisha esetshenziselwa amantombazane nabafana. Kukhona nezinto zangaphakathi zendawo yonke.
Ifenisha yanamuhla efulethini ngokuvamile ibonisa ukunethezeka kwayo ngokugcwele ngqo emgodini. Okungenani ngoba lesi simiso siwukuqala lapho izivakashi zibona lapho zingena endlini noma endlini. Nguye onika umbono wokuqala kokubili umnikazi kanye nezindlu njengamanye. Phakathi kokuhlukahluka kwanamuhla, akunzima ukuthola amasethi ahlukahlukene alula wezinhlobo ezingamangqamuzana nezinhlanganisela. Zingaba namabhokisi ahlukene, amakhabethe noma amashalofu. Ukwahlukana kusebubanzi, ukuhlanganisana nobubanzi. Ukuphakama okukhulu kunikeziwe kulawo ongakhetha angasetshenziswa ngabanye futhi ahlanganiswe kuye ngesidingo sezinto ezithile.
Kukhona uhlu oluthile lwezici. Kufanele uwasebenzise nakanjani. Kuvela ukuthi wonke umuntu efulethini kufanele abe. Sikhuluma ngesigqoko sokugqoka izingubo zangaphandle, i-hanger, i-rack, i-shaft, isibuko, abadwebi, isifuba sabadwebi, abanikazi bezambulela nezikhwama, amashalofu amahhashi, izigqoko nezinye izesekeli nendawo encane yokuhlala. Noma kunjalo, zonke ifenisha zanamuhla ezifakwe ohlwini (izithombe ezivezwe kulesi sihloko) ziyakwazi ukulingana kuphela emgodini omkhulu.
Izincomo zendiza encane
Umnikazi wamakamelo amancane kuzodingeka asebenzise izinto ezimbili noma ezintathu ohlwini. Kulolu cala, kuyoba yini kuleli kamelo, kuxhomeke kumnikazi kuphela. Khetha izinto ozidingayo kuphela lezo ezidingeka ngempela futhi zizosetshenziswa njalo. Ngokujwayelekile, kuyishalofu noma ikhebula, indawo yokuhlala nesibuko. Lokho kuyokwanela.
Imibhede engashadile kuphela nathi
Usayizi wezihlalo: izici zesitulo ejwayelekile
Sakhetha ikhabethe, izibuko zangaphakathi ngaphakathi
Ungakhetha kanjani isitsha sokugeza?
Izihlalo zezingubo zokuzivikela zizoletha induduzo nokulula
Ukusebenza ngezithombe: ISO evulekile
Subwoofer Passive izipika yesimanje
Incomo evela endaweni yomsebenzi. Isampula kanye namaphethini wokuHlelwa kahle
Isobho nge meatballs futhi amadombolo: iresiphi ngesithombe
Isizathu stomatitis kungenzeka yokuquba yonke indawo
Izihloko wenziwe ngendwangu. Yakha izinto ezinhle kusukela impahla elula
Isitifiketi Environmental - indlela ukwandisa ukuncintisana